Unai Emery oo amaan xoogan ka helay halyayga kooxda Manchester United Gary Neville – Gool FM
Unai Emery oo amaan xoogan ka helay halyayga kooxda Manchester United Gary Neville
(Premier League) 03 Dis 2018. Macalinka reer Spain ee kooxda Arsenal Unai Emery ayaa ku helay amaan xoogan qaabkii uu kaga bilaawday waayihiisa tababarka ee Gunners, gaar ahaan guushii 4-2 ahayd ay kulankii shalay kaga gaareen Tottenham.
Unai Emery ayaa la wareegay shaqo ay adkeyd in la qabto, kadib markii uu badal u noqday tababare Arsene Wenger, waxaana ay qof kasta fileesay inuu u baahnaan doono waqti ku filan, si uu Gunners ugu soo celiyo wadada saxda ah.
Hadaba halyayga kooxda Manchester United ee Gary Neville ayaa kadib marka uu soo idlaaday kulankii xiisaha badnaa ee kooxaha Arsenal iyo Tottenham wuxuu si weyn u amaanay macalinka reer Spain ee Unai Emery.
“Xaqiiqdii waxaan u maleenayay inuu u baahnaan doono saddex ama afar isbadal suuqyada soo aadan ee kala iibsiga, si kooxda ay ugu ciyaarto si wanaagsan, lakiin waan la yaabay”.
“Waxaad si cad u arki kartaa sida uu gacantiisa ugu hormariyay kooxda, wuxuu awoodaa inuu kasoo saaro kooxda sida ugu fiican”.
“Ciyaartoyda qaar ayaa ciyaari doona fursad ka yar sidii hore, dabcan Mesut Özil ayaa laga yaabaa inuu seego waxyaabo badan mustaqbalka, taasina waa kubada cagta, si fudud looma aqbali karo qof walba”.
Marco Verratti oo ka hadlay laacibka uu filayo inuu ku guuleysan doono abaal marinta Ballon d'or
“Aubameyang wuxuu i xusuusiyaa Thierry Henry taabashadiisa” - Aaron Ramsey